LG W11, LG W31 na LG W31 + mara ọkwa dị ka ụlọ ọrụ atọ n'etiti etiti | Gam akporosis
LG na-ejigide usoro nke mmeghe nke ekwentị ọhụrụ na 2020 nke ọ na-ezube iweghara oke nke ahịa ahụ mgbe ọ nọ n'oge oge doldrums. Lọ ọrụ ahụ ewepụtala ọkwa ọhụụ ọhụrụ atọ maka ahịa na-abụghị Asia.
LG W11, LG W31 na LG W31 + bụ ihe ọhụrụ site na ndị na-emepụta Asia maka ahịa ndị India, ọ bụ ezie na ha na-eme atụmatụ iru ókèala ndị ọzọ tupu njedebe nke afọ. Ọ dịghị onye n'ime ha kwụpụrụ iche, belụsọ W31 + nke vitaminized na ịbụ nhọrọ na-atọ ụtọ nke ukwuu.
1 Ha atọ kesara ọtụtụ ihe
Ha atọ kesara ọtụtụ ihe
na W11, W31 na W31 + na-abata na otu ihuenyo 6,52-inch IPS LCD site na mkpebi HD +, ha na-etinye MediaTek Helio P22 processor na batrị 4.000 mAh ka ọ dịruo ụbọchị niile. Firmlọ ọrụ Korea adịghị mgbagwoju anya mgbe ọ na-abịakwute ngwaike dị iche iche na nke ọ bụla n'ime ha.
N'ime ha atọ enwere obere ọkwa mmiri dị n'elu, ọnụ ọgụgụ megapixels bụ 8, na azụ W11 na-etinye ihe mmetụta 13 megapixel dị ka nke bụ isi na ihe omimi omimi nke 2 MP. Na LG W31 na LG W31 + na mgbakwunye na isi ihe mmetụta 13 MP na omimi 2 MP tinye 5 MP ultra-wide unit.
Ọnụ ego RAM na-adị iche na 3/4 GB, nchekwa nke 32/64/128 GB nke a ga-enwe ike ịgbasawanye n'ihi oghere ndị nwere ihe ruru 256 GB karịa. Android 10 bụ sistemụ arụmọrụ maka ekwentị atọ a ha nile bu 4G terminals, ha na Wi-Fi, GPS na Bluetooth bia. Ha nwere igwe okwu ekweisi na onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ.
LG W11 batara n'ụdị 3/32 GB maka ego nke 128 dollar (107 euro), na> LG W31 na nhazi 4/64 GB maka dollar 148 (euro 124) na LG W31 na 4/128 GB maka dollar 162 (euro 136 na mgbanwe ahụ). Ha ga-abata India n'izu na-abịa, ha ga-agakwa mba ndị ọzọ ọsọ ọsọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A mara ọkwa LG W11, LG W31 na LG W31 + dị ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ atọ dị n'etiti
Fortnite na-enye Disney ọnwa abụọ n'efu
Esi rụọ ọrụ ozi nwa oge WhatsApp tupu oge eruo